Google haatan waxa uu noqday kaaliyaha dalwaddii shakhsi ahaaneed ee dadka isticmaala android. Google ayaa sii daayay updates badan oo ku saabsan Google haatan, laakiin weli updates kuwa leeyihiin cayayaanka iyo Google qaadataa-celin users oo ay saxaan in update soo socda. Users weydiin su'aal ku saabsan dhib ka mid ah dhibaatooyinka ka heli marka la isticmaalayo Google hadda. Dhibaatooyinka ku saabsan Google hadda waa widget mid ka mid ah tan iyo markii ay soo Bixiyaa wax views burinaya. Dadka qaar dhaleeceeyo sababta Google ma abaalmarinayn Google hadda launcher qalabka oo dhan? Hadda waxa dhibaatada ku saabsan Google hadda widget. Sidaas halkan yimaado mawduuca inuu qoro maanta.
Google hadda widget waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo si ay u helaan Google hadda utilities fog. Google haatan soo iibsaday widget inuu ku siiyo qaab user fiican oo ka mid ah fog in ay helaan wararka cimilada, kaararka Google iyo qaar badan. Google ayaa keenay isbedelka weyn ee widget raadinta Google. Dadka sida widgets sabab badan iyo qaar ka mid ah dadka neceb Google hadda Widget dhiqlaha qaar ka mid ah. Hoos waxaa ku qoran su'aalo weydiiyay users badan sidaas darteed waxaan soo wada saaray si dadka isticmaala jawaabaha oo dhan in hal meel ka heli kartaa.
Q1. Sidee ku darto Google hadda Widget in screen guriga?
Google haatan yimaado qalab kasta android ayaa Android 4.1 iyo sare. Waxaad ka eegi kartaa si aad u hubiso in aad hadda ama aan lahayn Google. Si aad u ogaato ilaa dadban ka hoose ee shaashadda. Waxaad goobaabin doonaa jiidaa iyo waxa ay leedahay Google ugu sareysa. Waayo, dadka kale ee haddii uma baahnid in aad Google haatan qaar ka mid ah sidii aad uninstall laga yaabaa in Google hadda ka qalab ama ay dhacdo in aadan haysan Google hadda ka hor lagu rakibay-. Waxaa Hel halkan. Marka aad ku rakiban app aad u helaan in. Si aad ku dari in screen guriga kaliya samayn socda.
Home (tuubada dheer)> Dooro "Widget"> Eeg "Google search".
Q2. Google hadda aan la muujinaya kaararka kasta?
Tani waxa ay noqotay dhibaato guud ee Google badan oo hadda isticmaala. Dadka kaliya arki cimilada ee Google hadda widget. Waxaan ka maqlay dadka isticmaala badan oo ay leeyihiin kaararka badan, laakiin weli ma arkaan wax iyaga ka mid ah ee Google hadda widget. Halkan waa hab aad ku caawin kara. Waxaad u baahan tahay in aad xisaabta Google ka qalab aad ka saarto oo mar kale iska diiwaan gelin. Rajaynaynaa in dhibaatadan tegi doonaa.
Q3. Google hadda widget aan tusaya?
Dadka qaarkood ma arkaan Google hadda Widget ee liiska widget. Dhibaatada Tani waxay dhacdaa marka aad gab kasta oo iyaga ka mid ah raadinta Google, Google cod .Sababtuna Google hadda isticmaala oo labadoodaba waxaa ka. Haddii aad gab kasta oo iyaga ka mid ah markaas ma awoodi doonaan in ay dar widget in screen guriga aad. Sidaas darteed, waxaad hubisaa in aad taas adeegyada karti.
Q4. Google haatan waxba muujinaya?
Waxaan helay dadka qaar cabasho in ay Google hadda widget aan shaqayn ee ay qalab. Si loo xaliyo arrintan aad u baahan tahay in la sameeyo soo socda. Tag goobaha> barnaamijyadooda> dhan> heli (search Google)> tuubada on Google raadinta> data cad> khasnado cad. Rajaynaynaa in ay idiin samayn doono.
Q5. Google hadda aan la shaqeeyo oo aan la xiriira internet?
Google hadda isticmaala internet si aad u ogaato natiijadii ugu fiican. Ma shaqeyn doonaa iyada oo aan la xiriira internet. Sidaas si aad u hesho natiijo fiican ee aad dhaqaajiso gacanta la xidhiidha ama xiriiriso via Wi-Fi. Haddii aanad haysan internet waxa ay weli ma sii shaqeyn doonaa laakiin tani waxay khusaysaa qalabka oo keliya baaritaan. Haddii aan u shaqeeya baaritaan gudaha ka dibna raac edbinta hoos ku qoran.
Tag goobaha> barnaamijyadooda> dhan> heli (search Google)> tuubada on Google raadinta> data cad> khasnado cad.
Q6. Widget Google hadda cod amarka dhibaatada?
Google yimaado la dhisayo in Voice versions afaf kala duwan. Dadka la af Ingiriisi Koolajyada noqon kartaa in dhibaato ay u baadhaan via cod. Waxaad arki kartaa in Google hadda aan garashada aad ka hadli. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah Google hadda US isticmaalaa lahjadda Ingiriisi by default. Laakiin si aad dhaqaajiso aad Language gaar ah aqoonsi cod aad u baahan tahay in la sameeyo soo socda.
Google hadda Settings> Voice> Language> Dooro luqadda kuu gaar ah.
Hadda Google hadda awoodaan in ay aqoonsadaan codkaaga dhammaataan.
Q7. Google hadda arrinta size widget?
Qaar ka mid ah dadka isticmaala haysato dhibaatadan. Dadku waxa ay jiidayeen widget size 4x4 si screen guriga laakiin ay u shaqayso sida 4x1. Si kastaba ha ahaatee, User meel widget ku yaal bogga, waxa kaliya ee soo bandhigay 2, hal kaar, 4x1, gaadiidka iyo cimilada Dhab dhibaatadan ayaa xal lahayn weli. Tani waa cayayaanka ee Google hadda Widget iyo Google xogta dadka isticmaala badan. Google dhakhsaha badan sii daynayaa ay update cusub ee ku saabsan la dhalato ee arrintan. Sidaas awgeed, waxaan u baahan tahay inaad sugto update ee Google haatan, waxaana rajeyneynaa dhibaatadan waa la hagaajin doona.
Q8. Waa maxay code midabka (oo ay ku jiraan hufnaan) ee Google hadda Widget ee hadhkiisa?
Haddii aad tahay sameeysa ah markaas aad dooneyso in aad ogaato waxa code midabka ah ee Google ay hadda hadhkiisa. Halkan waa jawaabta sida aad u heli midabka la mid ah oo loo isticmaalo Google hadda. Isticmaal # 80D3D3D3 iyo isticmaalka saxda ah midabka # 4DEEEEEE.
Xagga sare, waa dhibaatooyinka ugu badan ee soo food saaray Google hadda isticmaala. Haddii aad hesho arrimo dheeraad ah oo la xiriira Google hadda widget aynu ognahay waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u helaan xal iyo ha updates post ee qodobkan ku dhow mustaqbalka.
> Resource > Android > 8 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay Google Hadda Widget